Archive du 20190225
Loza sesilany eto Madagasikara Tonga ihany koa ny ny andiam-balala
Ahitana andiam-balala (valala kijeja) maro amin'iny lalana mankany Belo/Tsiribihina(Toby Betesda- Allée des Baobabs-Bekonazy) iny amin'izao fotoana.
Kandida depioten’ny TIM Tana V Ralambozafimbololona Fetra no lanin’ny “Base”
Hanomboka rahampitso talata 26 febroary hatramin’ny 12 martsa ny fandrotsahana ny antontan-taratasin’ireo ho kandida solombavambahoaka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Hazakazaka ho eny Tsimbazaza Hanolotra kandidà tokana ny ARMADA
Rahampitso talata 26 febroary no hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny hazakazaka ho eny Tsimbazaza. Manomboka amin’ny 9 ora maraina ny fandraisana ireo antontan-taratasy sy anto-bola ho an’ireo hirotsaka solombavambahoaka eny anivon’ny CED manerana ny nosy.
Nivoaka tamin’ny filankevitry ny minisitra farany teo ny didim-panjakana lah. 2019-189 entina hamerana ny isan’ny solombavambahoaka ho 151 sy ny fari-pifidianana manerana ny nosy.
Ho politikan’ny fananganana sekta ?
Ora sisa isaina dia hanomboka ny fandraisana ny antontan-taratasin’ireo ho kandida depiote hiady ny toerana etsy amin’ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza.
Elikoptera nampiasain-dRajoelina Naverina fa tsy voaloa vola intsony ?
Re ankehitriny, fa naverina any Afrika Atsimo tamin'iny faran’ny herinandro iny ilay angidimby raitra ZS RZA de A BELL430 iray tamin’ireo maromaro mpitondra ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina tamin’ny fampielezan-kevitry ny fifidianana filoham-pirenena.
Vahoaka Malagasy Beazina hiankin-doha lava fa tsy hamokatra
Tsy maintsy mitondra vahaolana ho an’ ny fiainam-bahoaka ny fitondram-panjakana ao anatin’ ity telo volana voalohany ity raha tiany ho tafavoaka anatin’ izao fahantrana lalina izao ny firenena.
Ruffine Tsiranana Nodimandry tany Parisy teo amin’ny faha-80 taonany
Nodimandry teo amin’ny faha-80 taonany tany Parisy ny sabotsy lasa teo Rtoa Ruffine Tsiranana. Zanaka vavy fahatelon’ny filoha teo aloha Philbert Tsiranana sy Justine Kalitody izy.
Zaridainan’Antaninarenina Hosaziana izay nivarotra azy
Nidina ifotony teny amin’ny zaridainan’Antaninarenina ilay toerana voalaza fa lasan’olon-tsotra tamin’ny taona 2018 ny minisitry ny fanajariana ny tany, ny fanamboaran-trano sy ny asa vaventy Atoa Hajo Andrianainarivelo ny sabotsy 23 febroary teo.
ANDOTIANA Halevina anio eny Ampitatafika
Eny amin’ny fasan-drazany, Tangaina Ampitatafika no hotanterahina ny fandevenana an’i Andotiana, aorian’ny fotoam-pivavahana manomboka amin’ny 12 ora sy sasany anio alatsinainy 25 febroary.
Volley-Ball Analamanga Lany ho filoha i Raharimalala Léa
Tontosa tamin’ny sabotsy 23 febroary 2019 teo teny amin’ny LTC Ampefiloha ny AGE an’ny ligin’ny taranja volley-ball eto Analamanga. Taorian’ny tatitra nataon’ny filoha teo aloha Rasamison Hajaniriana ka nahazoany “Quitus”
As Andry Bongolava “Ny Ajesaia no tokony ho saziana…”
Somary nampalahelo kely anay As Andry ny valin-teny azo avy amin’ny “ Comité de discipline FMF” tamin’ny fandefasana tany amin’izy ireo ny “reserve de qualification” nataonay tamin’ny ekipan’ny Ajesaia Bongolava
Fisavana taratasina fiara eny amin’ny lalam-pirenena Naato fa tsy natsahatra
Manipika mazava ny filankevitry ny governemanta notanterahana ny zoma 22 febroary lasa teo fa fampiatoana ny fisavana taratasina fiara eny amin’ny lalam-pirenena ihany no natao fa tsy hoe fampitsaharana azy tanteraka akory.
MAHANDRO NY SAKAFONY I MBOLA RAJAONAH
Nanaterana vilany i Mbola Rajaonah ary izy ihany no mahandro ny sakafony hialana izay mety ho famosaviana azy ao am-ponja.
Fanapariahana fanafody tsy azo antoka Efa tambajotrana mafia mihitsy
Miparitaka ny fanafody eto Madagasikara izay misy ny tsy azo antoka satria efa tambajotrana mafia no manaparitaka azy. Efa tsy manaraka ny dingana samihafa miainga amin’ny ozinina mpamokatra, mpamongady (grossiste),
Fanorenan-trano Mitombo isa kanefa ny firenena miha mahantra
Mitombo isa hatrany ny mpivarotra kojakoja fanamboarana trano eto an-drenivohitra na any amin` ny faritany aza. Midika izany fa mandeha ny tsena ary hahazoana tombony.
Distrikan’Ihosy Nialana ny fomba tsy mampandroso
Mbola maro fomba ny any amin’ny faritr’Ihorombe. Anisan’izany ny fomba bara izay tsy mampiana-janaka.
Akanin’ny marenina - 67 ha Afaka handray ireo kilonga madinika 2 taona amin’izay
Ho afaka handray ireo kilonga madinika 2 taona manana olana ara-pihainoana manomboka amin’ny volana martsa ho avy izao ny Akanin’ny Marenina etsy 67 ha.
Tanora mpianatra Hofanina ho mpandraharaha fa tsy hitady asa fotsiny
Betsaka amin’ireo tanora mpianatra nahavita fianarana eto amintsika amin’izao no tsy mahita asa akory.